Qalabka dhismaha ee Gypsum iyo putty - Divenland
Caleenta biyaha u adkeysata ee derbiyada gudaha, dabacsanaanta derbiyada dibedda
Saddex lakab ayaa loo naqshadeeyay markii la rinjiyeysanayo dhisme: derbiga, lakabka guntinta iyo lakabka rinjiga. Sida lakabka khafiifka ah ee balastarka, balastarku wuxuu u shaqeeyaa sidii taageero loogu talagalay lakabyada sare iyo hoose. Waxtarka wanaagsan ma aha oo kaliya inuu diido dildilaaca substrate iyo diirka lakabka rinjiga, laakiin sidoo kale wuxuu siiyaa dhammeystir siman oo aan xaddidneyn darbiga. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa ujeedooyin qurxin iyo shaqeyn. Waxyaabaha Cellulose waxay siinayaan shaqalaha waqti ku filan oo ay ku shaqeeyaan waxayna dammaanad kaqayaan qoynta, dib u soo celinta iyo jilicsanaanta substrate. Duugista dufcaddii, laakiin sidoo kale waa inay sameysaa culeysku wuxuu leeyahay waxqabad wanaagsan oo isku xirnaan leh, dabacsanaan, carrabka, iwm ..
Max cellulose ether wuxuu si weyn hoos ugu dhigi karaa burburka ku jira budada qalalan inta lagu dhex qasaayo biyaha, taasoo fududeynaysa iskudhaca iyo badbaadinta waqtiga isku darka. Dhismooyinka wanaagsan ee biyaha hayaa waxay si weyn hoos ugu dhigayaan qaddarka biyaha ee derbigu ka nuugo, taas oo hal dhinac u horseedaysa saamayn fudud oo jilicsan. Maaddada gelku waxay haysataa waqti ku filan oo ay ku kareyn karto, taas oo ugu dambeyntii hagaajineysa xoogga bondka, dhanka kale, waxay hubineysaa in shaqaalaha ay dumin karaan darbiga dhowr jeer. Dufcaddii dufanka ether cellulose wax laga beddelay, xitaa heerkulka sare, laakiin weli wuxuu hayaa biyo wanaagsan, oo ku habboon xagaaga ama meelaha kulul. dhismaha; waxay sidoo kale si weyn u kordhineysaa xaddiga biyaha looga baahan yahay walxaha 'putty', oo dhinacba u wanaajinaya waxqabadka jilitaanka ka dib markii lagu dabaqay darbiga, dhinaca kalena, waxay kordhin kartaa aagga dahaadhka ee putty. qaaciddada ayaa ka dhigaysa mid dhaqaala badan.
Qalabka dhismaha ee ku saleysan Gypsum
Nidaamka gidaarka ku dhisan gypsum-ku waa fal-eco-wall shaqeynaya. Waxay u qaadataa gypsum inay tahay sheyga loo yaqaan 'gelpsum', sidaa darteedna waxay si habsami leh u xallinta dhibaatooyinka taxanaha ah sida godka iyo dilaaca, kuwaas oo ku jira agabka ku saleysan sibidhka. Adeegsiga dhismaha farsamada kaliya ma hagaajinayo waxtarka, laakiin wuxuu sidoo kale hubiyaa tayada mashruuca. Gypsum waa nooc ka mid ah waxyaabaha dhismaha oo sameeya mikroporro waaweyn oo ka mid ah maaddada ka dib marka la daaweeyo, waxayna door muhiim ah ka qaadataa qurxinta gudaha ee casriga ah. Alaabada ku saleysan 'gypsum', cellulose ether-ku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan madaafiicda iyo kuwa la mid ah.
Uma aha mid xasaasi u ah alkalinity-ka gypsum waxayna si dhakhso leh u dhexgeli kartaa alaabada gypsum iyada oo aan agglomeration ahayn, taas oo aan saameyn xun ku lahayn jilicsanaanta alaabada gypsum ee la daaweeyay; hantideeda biyaha ku fiican ayaa hanan karta biyaha hoobiye ah, halka gypsum-ka si buuxda loo adkeeyay; isku dhejiska qoyan ee haboon ayaa hubiya awooda isku xidhka maaddada ee substrate-ka, taas oo si weyn u wanaajisa waxqabadka dhismaha ee alaabada 'gypsum', waana sahlan tahay in la faafiyo iyada oo aan lagu dhejin mindi; waxqabadkeeda wanaagsan ee ka hortagga qulqulka ayaa u oggolaaneysa dhisaha inuu codsado lakabyo ka sii dhumuc weyn iyadoo aan sababi karin dhismayaal; qaddarka go'an ee madaafiic qalalan, joogitaanka ether cellulose waxay soo saari kartaa mugga madaafiic badan.
Dhismo cusub oo is-xireyn ah
NABADGELYADA NATIIJADA AYAA LAGU SAMEEYAA
Dhismeyaasha cusub ee is-xireynta waxay ka kooban yihiin baloogyo waaweyn oo jirka ah, lakabka dahaaridda kuleylka bannaanka, maaddada asaasiga ah ee kuleylka, lakabka difaaca iyo tiirarka kuleylka isku xirka. Inta u dhaxaysa darbiyada gudaha iyo bannaanka ee qaybta weyn ee jidhka, inta u dhexeysa qaybta weyn ee jirka iyo lakabka difaaca sare, wuxuu maraa "L-qaabeeya T-dhibic isku xiraya feeraha" iyo "lakabka dahaarka". "Pin pin" ayaa la isku darayaa guud ahaan, iyo fiilooyin bir ah ayaa lagu rakibay pin. Saldhigga hubinta nabadgelyada, wuxuu yareyn karaa saameynta buundada qabow wuxuuna leeyahay waxqabadka kuleylka heerkulka wanaagsan.
1 performance Heerka xakamaynta kuleylka heer sare ah iyo saamiga waxqabadka.
2, si weyn u yareeya jiilka burburka gidaarka iyo burburintiisa, si weyn u wanaajiya tayada mashruuca
3 、 Ku korsado nuujinta birta ah, si weyn u kordhiya awooda jaajuusnimada